फेसबुक लोगोबाट २० लाख पर्यटन भित्र्याउने योजना तर पूर्वाधारमा ध्यान खोई ? | Suvadin !
नेपाल पर्यटन वर्ष २०२०
फेसबुक लोगोबाट २० लाख पर्यटन भित्र्याउने योजना तर पूर्वाधारमा ध्यान खोई ?
Aug 15, 2019 12:59
काठमाडौं । नेपाल भ्रमण वर्ष सुरू हुन अब केवल चार महिना मात्र बाँकी छ । पर्यटन मन्त्रालयले स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारीकै योजना अनुसार नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य लिएर अघि बढिरहेको छ । हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी अधिकारीको निधन भएको ५ महिनापछि देशले नयाँ पर्यटनमन्त्रीका रूपमा ताप्लेजुङबाट निर्वाचित सांसद योगेश भट्टराईलाई पाएको छ । पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा भट्टराईले आफू आफ्नो आत्मीय मित्र रविन्द्र अधिकारीको उत्तराधिकारी भएर आएको बताएका थिए ।
भट्टराईका सामू नेपाल पर्यटन वर्ष २०२० लाई सफल बनाउने चुनौती मात्र छैन, निरन्तर खस्कँदै गैरहेको नेपाल वायुसेवा निगमको साख पनि उकास्नुपर्ने छ । यसका लागि भट्टराईले सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर छलफल र संवाद जारी रहेको बारम्बार दोहोर्‍याउँदै आएका छन् ।
तर, गत शुक्रवार नवनियुक्त पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले राजधानीस्थित एक भव्य होटलमा आयोजित एक कार्यक्रममा पर्यटन वर्ष २०२० लाई सफल बनाउन सबैलाई टुंडिखेलमा बोलाएर सपथ खुवाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । नेपाल भ्रमण वर्ष सबै मिलेर सफल बनाउनुपर्ने र सपथ खान प्रधानमन्त्री पनि टुँडिखेलमा उपस्थित हुने उनको दाबी थियो । यो सकारात्मक काम नै हो ।
आइतवार भट्टराईले सबै नेपालीले सामाजिक सञ्जालमा भ्रमण वर्षको लोगो राख्न आह्वान गरे । विज्ञप्तिमार्फत नै गरिएको उक्त आह्वानपछि कतिपयले फेसबूक, ट्वीटर र इन्स्टाग्राममा 'प्रोफाइल पिक्चर' परिवर्तन पनि गरिसकेको सामाजिक सञ्जालमा देख्न सकिन्छ ।
यस विषयमा विभिन्‍न खाले टिकाटिप्पणीहरु भइरहेका छन् । केहीले सकारात्मक सन्देश भन्दै टिप्पणी गरेका छन् भने केही प्रोफाइल पिक्चरले पर्यटन बोलाउने पर्यटनमन्त्रीको योजना बच्चापन भएको टिप्पणी गरेका छन् । वास्तवमा नियालेर हेर्ने हो भने अहिले उक्त प्रोफाइल पिक्चर सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले राख्नुपर्द्थ्यो । त्यो देखिएको छैन । उनीहरुले राख्दा सामाजिक सञ्‍जालमा उनीहरुको विदेशीसामु पनि पहुँच छ र सहि प्रचार हुन सक्थ्यो । विभिन्‍न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायमा कार्यरत, कुटनीतिक व्यक्तित्वहरु, बौद्धिक वर्गलगायतले राख्नुपर्द्थ्योव । विदेशमा भएका नेपालीहरु तथा राजदूतहरुले राख्‍नुपर्दथ्यो । तर, त्यो देखिएन । उनीहरुले त्यसो गर्दा बढी पहुँच र प्रभावकारी हुने थियो ।
तर, भिजिट नेपालको लोगो अधिकांश नेकपामा तल्लो तहका अधिकांश कार्यकर्ताले र केही फेसबुकमा जोडिएका सर्वसाध प्रयोग गरेका छन् । जसमा उनीहरुका विरलै एक-दुई जना विदेशी साथीहरु होलान् । अब उनीहरुले राख्‍नुको औचित्यका विषयमा उनीहरु नै जानून । यहाँ भन्‍न खोजिएको पर्यटनमन्त्रीको लोगो प्रोफाइलमा राखेर २० लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना कता जाँदैन र कति प्रभावकारी हुँदैछ भन्‍ने दृष्टान्त दिन खोजिएको हो । अब समस्या टार्ने र समस्या पाल्ने समय सरकारसँग छैन । यसकारण यस्ता सामान्य विषयमा धेरै समय खर्च गर्नुभन्दा प्रभावकारी ढंगले बृहत्तर पहुँच हुने किसिमका योजनाहरु अघि सार्नु आवश्यक देखिन्छ ।
नेपाल सरकारले भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउन अहिले प्रचारलाई तीव्र बनाएको छ । तर भ्रमण वर्षका लागि चाहिने पूर्वाधारका बारेमा भने सरकार अहिलेसम्म मौन नै देखिएको छ । नेपालको पर्यटन पूर्वाधारको बारेमा सरकार जुन गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यसरी अगाडि बढ्न सकेको छैन। यहाँ आउने पर्यटकलाई नेपालले कसरी स्वागत गर्छ भन्ने कौतुहलता यत्रतत्र रहेको छ । अहिलेको पूर्वाधारलाई हेर्ने हो भने नेपाल आउने पर्यटकले मुखमा माक्स नलगाई हिँड्न सक्ने अवस्था छैन ।
नेपाल आउने एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हालत हेर्ने हो भने कहाली लाग्दो अवस्था छ। त्यस्तै नेपाल भित्रिएका पर्यटकलाई जुन ढंगले स्वागत गर्नुपर्ने हो त्यो विगतदेखि नै हुन सकेको देखिँदैन । कर्मचारीतन्त्रको मानसिकतालाई हेर्ने हो भने यहाँ आउने पर्यटकले नेपालको बारेमा वर्णन गर्नुभन्दा पनि यहाँका कर्मचारीले दिने दुःखको बारेमा उपन्यास नबनाऊलान् भन्न सकिन्‍न ।
पर्यटक विमानस्थल ओर्लिएपछि सबैभन्दा पहिला देख्ने र घुम्ने ठाउँ निसन्देह काठमाडौं हो । तर काठमाडौंमा धूलोधूँवा, हिलो र अन्य प्रदूषण उच्च छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका सन् २०१६, १७ र १८ का इन्भायरमेन्टल पर्फमेन्स इन्डेक्स (इपीआई) रिपोर्टहरू अनुसार एकसय ८० देशमध्ये अत्यधिक धूलोधूवाँ र प्रदूषण हुनेमा नेपाल एकसय ७७ औं स्थानमा पर्छ ।
स्मरणीय के छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक-पटक काठमाडौंका सडकहरू पानीले पखाल्ने वक्तव्य दिइरहन्छन् । काठमाडौंको धूलो सफा गर्न महानगरपालिकाले केही थान ब्रुमरहरू चलाइरहेको पनि छ ।
धूलोको स्रोतलाई व्यवस्थापन नगरिकन गरिएका यस्ता प्रयास सफल भइरहेका छैनन् । गत सालको असार १६ गते बलिउडकी पुरानी र सफल अभिनेत्री जुही चावलाले विश्वमै काठमाडौंको बेइज्जत हुने गरेर एक ट्वीट गरिन् ।
एक सातालामो नेपाल भ्रमणमा गरेकी चावलाले भारत फर्किनेबेलामा पशुपतिबाट निस्केपछि चारजना अन्य साथीहरूसँग मास्क लगाएको फोटो पोस्ट गर्दै 'अत्यधिक धूलो, अत्यधिक ट्राफिक, हावामा अत्यधिक डिजेल र पेट्रोलको धुँवा.. हामीले आफ्नो अनुहार छोप्नुपर्‍यो,' भनेर क्याप्सन लेखिन् । उनको भेरिफाइड ट्वीटर एकाउन्ट ४७ लाखले फलो गर्छन् । त्यसको वर्षदिन बित्दा पनि काठमाडौंको हालत सुध्रिनेतिरभन्दा पनि झन बिग्रिरहेको छ ।
चावला एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । दुई वर्ष अघि एकजना विदेशीले एयरपोर्टका कर्मचारीले घुस मागेको भन्दै फेसबुकबाट लाइभ गरे । बाढीपीडितलाई राहतका लागि ल्याएको सामानमा एयरपोर्टका कर्मचारीले घुस मागेको दाबी गर्दै उनले भिडियो लाइभ गरेका थिए । यसले पुष्टि गर्छ, समग्रमा काठमाडौं हेर्ने प्रायः विदेशीको आँखामा काठमाडौंको राम्रो तस्विर झल्किँदैन ।
नेकपा कार्यकर्ता अर्थात नेपाली अमुक सर्वसाधारण नागरिकले भिजिट नेपालको लोगो आफ्नो सामाजिक सञ्‍जालमा राखेभन्दा बढी प्रभावकारी ती दुई प्रतिनिधि विदेशी पात्रले गरेको ट्विट र फेसबुक लाइभको हुन्छ । त्यसकारण पर्यटन वर्ष मनाउन प्रभावकारी योजना, प्रचार र पूर्वाधार विकासमा विशेष गति प्रदान गर्द अझै पनि ढिलो गर्नुहुँदैन । यदि अझै त्यही धिमा गतिमा पर्यटन मन्त्रालय र सरोकारवाला निकाय जाने हो भने लक्ष्य भेटाउने त कता हो कता, नियमित पर्यटकको आगमनमा पनि धक्का लाग्‍न सक्छ । समय छँदै योजना कार्यान्वयनमा अघि बढ्न आजको मुल आवश्यकता देखिन्छ ।